Ukusetshenziswa komshini wokusika we-robot fiber laser embonini yezimoto
Isikhathi sokuthumela: Jun-15-2020
Ukusetshenziswa kokusikwa kwe-laser eguqukayo embonini yezimoto sekuyinsakavukela, okuxhunyaniswe ngokungalingani ekwakhiweni kobuchwepheshe be-laser kanye nokwenza ngcono ubuchwepheshe bokulawula i-robot eqondile. Ngaphansi kwesimo esisha, izidingo zabasebenzisi bezimoto ...Funda kabanzi »
Izimboni zokufaka eziyisishiyagalolunye zomshini wokusika we-laser
Ngemuva kweminyaka engaphezu kweshumi yentuthuko, umshini wokusika i-laser usevele uthathe isikhundla senqubo yendabuko futhi waba ngumkhakha wokuqalwa kwensimbi yensimbi. Njengamanje, imikhiqizo ehlukahlukene yokusika i-laser ingabonakala yonke indawo empilweni. Yiziphi izimboni ezidinga ukusikwa kwe-laser? Ukusika kwe-Laser ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: Feb-26-2020
Le coronavirus entsha engazelelwe iyisivivinyo sokuhwebelana kwangaphandle kweChina, kepha akusho ukuthi ukuhwebelana kwangaphandle kweChina kuzolala phansi. 2:54 pm ET, ngoJanuwari 27, 2020, uDkt Nancy Messonnier, umqondisi weSikhungo Sokuvikela Izifo kanye Nezokuvikela Izwe lase-US ...Funda kabanzi »
Ukubuka kuqala kombukiso: I-Oree Laser izobamba iqhaza e-India's Machine Machine Tool forming Technology and Tools Exhibition (IMTEX)
Isikhathi sokuthumela: Jan-06-2020
Ukubuka kuqala kombukiso: Isikhathi se-2020 International forming Technology Exhibition Isikhathi: 23-28 Januwari 2020 Ikheli: 10th Mile, Tumkur Road, Madavara Post, Bangalore - 562 123, Karnataka (India). I-Booth: Amamodeli we-H4-A147 ayaboniswa: Umshini wokusika we-Flasbed fiber laser u-OR-F Middle sheet fiber laser c ...Funda kabanzi »
Ubuchwepheshe obusha be-Oree, ukusika insimbi engagqwali!
Ngekhulu lama-21, imboni yeChina engenasici ikhula ngesivinini esikhulu. Ukusuka ekuhlaziyweni komkhakha wesicelo sensimbi engagqwali, imboni yezimoto iyinsimu yesicelo sensimbi engakhula ngokushesha njengamanje. Umkhakha wezinto ezisetshenziswayo wasekhaya waseChina uyimakethe engaba khona yensimbi ...Funda kabanzi »
Ukuphakanyiswa kokuphela konyaka
Order 1kw and above power laser cutting machine, give away 2 years of wearing parts! OR-F series FLATBED FIBER LASER CUTTING MACHINE OR-P series PROTECTIVE FIBER LASER CUTTING MACHINE Date: December 12th, 2019-January 15th, 2020 Funda kabanzi »
I-Oree laser yokuthuthukisa okusha i-OR-PT
Isikhathi sokuthumela: Nov-22-2019
I-Oree laser enkulu yokuvikela ukugcwala kanye nomshini wokusebenzisa umshini wokusika i-fiber laser i-OR-PT entsha, ngokusekelwe kokugcina ukusebenza okuhle kakhulu kokusika, iphinde iqinise umqondo wokuvikelwa kwemvelo okuluhlaza. Kufakwe ikhava entsha yokusika amapayipi ukwenza i-O ...Funda kabanzi »
OREE ukonga tube laser cutting umshini NOMA-TL inthanethi!
isikhathi Iposi: Septhemba-30-2019
OREE Laser usethule T-Series ukonga tube laser cutting umshini NOMA-TL umkhiqizo omusha. I-X, Y no-Z-eksisi imivimbo bayanda. Nakuba esaziwa imisebenzi yendabuko NOMA-T, inkampani inikeza amakhasimende ezihlukahlukene ipayipi ahlabayo ubuchwepheshe izixazululo. I okukhethekile intengo i ...Funda kabanzi »
OREE laser NOMA-PT ukubukeka yokuthuthukisa entsha
isikhathi Iposi: Septhemba-23-2019
Laser ahlabayo umshini, ipuleti tube-dual-injongo laser cutting umshini, ipuleti tube ebiyelwe ngokugcwele laser cutting umshini, entsha ethuthukisiwe laser cutting umshini. OREE laser P uchungechunge lokushintshisana platform tube futhi tube-dual-injongo fibre laser cutting umshini (NOMA-PT) ukubukeka izinga entsha. ...Funda kabanzi »
OREE ngesandla laser Welding umshini NOMA-HW
isikhathi Iposi: Septhemba-04-2019
OREE Laser ngokusemthethweni wakhulula ngesandla laser Welding umshini NOMA-HW. I ngesandla Welding umshini sishintsha bendabuko Welding indlela, esebenzisa imisindo ephakeme-umfutho laser ugongolo njengoba umthombo ukushisa kwabashiselayo, futhi esikhundleni ngaphambili esinqunyiwe endleleni optical ne ngesandla Welding isibhamu. It has th ...Funda kabanzi »
ikhasimende Russian ngempumelelo baba nomhlangano
isikhathi Iposi: Aug-29-2019
NOMA-FM3015 inkomfa owawuse ngempumelelo ngempumelelo eRussia. I eqinile igobolondo uthayela nepheleleyo workpiece Isivivinyo cut eladonsa amehlo izilaleli. Ukuthengwa OREE laser cutting mshini ngesinqumo sethu ilungile kakhulu. Ukwengeza NOMA-FM3015 kuzokwenza ngcono processi ...Funda kabanzi »
Qingdao International Machine Tools Isentha
isikhathi Iposi: Jun-11-2018
Sicela ukunakwa amakhasimende ethu ufuna laser cutting imishini, njengoba OREE laser uzohambela Qingdao umshini amathuluzi ngamazwe embukisweni ngo-August. Lokhu International Fair of Machine Amathuluzi Technologies for Production - umbukiso ezibaluleke kakhulu jikelele producti ...Funda kabanzi »
2017 Wokucwaninga ka Ji'nan Foreign Trade Enterprises
Ngo 5th April 2017, "2017 Wokucwaninga ka Ji'nan ukuhweba Foreign amabhizinisi" kwaba oluncike OYADE Group. Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-15 enkampanini abengezanga kulo mhlangano aim ukwabelana angaphandle ukuhweba nesipiliyoni kanye namathuba. Inengi labahlanganyeli kuyinto CEO noma Sales umqondisi wenkampani leseluhleni ekhatsi manufactur ...Funda kabanzi »
Siyabonga Wonke umuntu
Uma ngibheka emuva Juni, 2017, Oree Laser Ziningi sokuvuna kanye Thanksgiving. Siyabonga njalo amaklayenti, ngiyabonga sokuthembela kwethu, Siyabonga zethu zonke Oree Laser. Ngenxa wena, Oree Laser babe sokuvuna kangaka. Siyabonga yonke ingxenye Oree Laser, umnikelo self-akunika Oree Laser Elomuntu & d ...Funda kabanzi »
IMenenja Ephakathi Ukwakhiwa Ukuqeqeshwa OYADE Group
Ukuze lelisu phakathi ukwakhiwa umphathi, liqalise "Wina phakathi" isu, 12, ngoJuni, comapny yethu umeme China Human Resource Development Association isivakashi inkulumo Lu Hualong zethula isipho ku ehhovisi. Zonke phakathi nanager ifomu OYADE Group kanye izikhulu zalo khona thi ...Funda kabanzi »
Laser Cutting Izinzuzo kusukela Oree Laser
Laser ahlabayo bekulokhu kunenzuzo kuqhathaniswa nezinye izinhlobo ahlabayo bendabuko njengoba kwethulwa. On steel omnene, insimbi engagqwali, kanye ne-aluminium le laser cutting nqubo olunembile kakhulu, inikeza kakhulu ukunquma izinga, has a kerf encane kakhulu, (ububanzi ukunquma noma inkatho) has a ezincane ...Funda kabanzi »
Imibuzo Evame Ukubuzwa of Laser Cutting Process kusukela Oree Laser
Ungathola isixazululo evamile mayelana umshini laser yokwehlisa kanye laser cutting inqubo. Ukusebenza Isimiso Laser ukuzisika akuwona ubuchwepheshe olusebenzisa laser ukusika izinto, futhi ngokujwayelekile esetshenziselwa izicelo yokukhiqiza ezimbonini, kodwa futhi ukuqala ukuthi asetshenziswe izikole, amabhizinisi amancane ...Funda kabanzi »